Cayaaryahan Somaliyeed Oo Markii Ugu Horeysay ka Qeybgali doona Kuubka Aduunka. – Heemaal News Network
October 4, 2017 Cayaaraha, Soomaaliya
Ciyaaryahan Mukhtaar Cali Afgooye oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday Xulka Kubadda cagta ee Sacuudi Carabiya, waxaana la filayaa in markii ugu ka horeysay uu qeybgalo cayaarta Kubadda Cagta Aduunka ee lagu qaban doono dalka Ruushka.
Mukhtaar oo ku dhashay dalka Sacuudiga sanadkii 1997, ayaa ku koray dalka Ingiriiska, waxaa uu ka mid noqday da’yarta Kooxda K/cagta ee Chelsea, isagoo ka baxay Akadeemiyada kooxdaas.
Waxaa uu soo ciyaaray Xulka Ingiriiska, gaar ahaan ciyaartoyda ay da’dooda ka hooseyso 16 iyo 17 jirka.
Mukhataar ayaa kooxda Chelsea kula guuleystay Koobka da’yarta ee FA Youth Cup iyo Koobka da’yarta Horyaalada Yurub ee Uefa Youth Cup sanadihii 2015/2016.
Cayaartoyga Soomaaliga ah leh xirfad Kubaddeed, waxaa uu ka ciyaaraa khadka dhexe, isaga oo noqon doona ciyaaryahankii u horeeyay oo Soomaali ah oo ka qeyb gala Tartanka Ciyaaraha Adduunka ee lagu qaban doono dalka Ruushka sanadka 2018.
Qoraal ku qornaa afka Carabiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu uga mahad celiyay U adeegaha Labada Xaram iyo dhaxal sugihiisa, waxaa uu tilmaamay inay sharaf u tahay inuu u adeego Boqortooyada Sacuudiga, isla markaana uu matalo Xulka Qaranka.
Waxaa uu tababar la bilaabay xulka Kubadda cagta ee Sacuudiga oo mar hore ku guuleystay in uu xaqiijiyo u soo bixida Koobka Adduunka.
Madaxwayne Siilaanyo Oo Qaabilay Wafdika Socday Midawga Yurub.
Dowlada Jarmalka Oo ka Hirgelinaysa Mashaariic Horumarineed Dalka Soomaaliya.(Sawiro)
Maxaad ka Ogtahay Xabsiga Qasriga ah Ee Ganacsatada Iyo Amiirada Sucuudiga ay ku Xidhan-yihiin?(Sawiro)
November 27, 2017 Caalamka
Hoteelka Ritz Carlton ee magaalada Riyadh oo ahaa mid ka mid ah hoteelada ugu raaxada badan ee heerka boqortooyo ayaa waxa hadda loo badalay xabsi lagu hayo boqolaal shaqsiyaad isugu jira amiiro boqortooyada ka tirsan […]
Amiir Salmaan Oo Xabsiga Ku Guray Amiiro Ku Hor Mudahraaday Guriga Boqortooyadda Sacuudi Carabiya
January 7, 2018 Caalamka
Sida ay sheegtay Dowladda Sucuudiga, amiirradan aanan magacyadooda la shaacin waxa ay ka cabanayeen laba arrimood. Waxa aanay ku faraxsanayn inay iyagu iska bixiyaan kharashaadka ay ku isticmaaleen biyaha iyo korontada taas oo qeyb ka […]
Isbaheysiga Sacuudiga Oo Cuna-qabatayn Bad Iyo Bariba kusoo Rogay Dalka Yemen.
November 6, 2017 Caalamka
Isbaheysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa xiray marinada Yemen laga galo ee dhinacyada Badda, Berriga iyo Hawadaba ah. Arrintaasi waxa ay ka dambeysay markii weerar gantaal loo adeegsaday ay Jabhadda Xuutiyiinta Yemen sabtidii ku qaadday Gigida […]